Ilitye elimhlophe-Imveliso yenkwenkwezi yekhaya lakho | Bezzia
USusana godoy | 13/01/2022 14:00 | Ikhaya
Uyalazi ilitye elimhlophe? Ngokuqinisekileyo uvile ngayo, kuba ibalulekile kwikhaya lethu. Kodwa yikholelwe okanye ungayikholelwa, xa usazi zonke izibonelelo zayo, uya kuyifuna ukuba awunayo. Ngamanye amaxesha kuyinyani ukuba sijonga iimveliso ezithile kwindawo nganye. Kodwa, ungathanda njani ukuba yonke into ibenye?
Yinto ethi bekuya kusisindisa kokubini esithubeni ekhaya nakwindawo yezoqoqosho. Ngoko, sinokuqala ukufumanisa zonke iingenelo ezinamatye amhlophe kunye nendlela enokusetyenziswa ngayo ukuxhamla kakhulu kuyo. Sikuxelela yonke into ukuze ungalahlekelwa zinkcukacha!
1 Yintoni enokucocwa ngelitye elimhlophe
2 Indlela yokusebenzisa ilitye elimhlophe
3 Yenziwa ngantoni le mveliso yokucoca?
4 Iinzuzo ezinkulu zamatye
Yintoni enokucocwa ngelitye elimhlophe
Apha phantse, kuya kufuneka sizibuze umbuzo ochaseneyo: Yintoni engenako ukucocwa ngelitye elimhlophe? Ngenxa yokuba inyaniso kukuba xa sicinga ngokucoca ikhaya lethu, olu hlobo lwemveliso yendalo lunokusetyenziswa kwiindawo ezininzi. Ke ngoko, zombini iiplastiki kunye ne-enameled okanye insimbi engenasici zinokucocwa ngayo. Kodwa ke, ngaphezu koko, iya kufanela isilivere, ubhedu kunye neekristale. Ukongeza, ekhitshini sinokucoca zombini i-sink, i-ceramic hob kunye ne-marble okanye i-granite. Ikwafanelekile kumagumbi okuhlambela kunye neetephu, kunye nokususa amabala erusi. Ngoko ungoyiki ukuyisebenzisa, ngakumbi kwezo ndawo zinokuthi zixhathise ukucoca.
Indlela yokusebenzisa ilitye elimhlophe
Kuyinyani ukuba kuya kubakho iinketho ezininzi, kodwa ezinye zezona zisisiseko zihlala zizisa isipontshi ukwenza lula ukucoca. Kufuneka simanzise esi sipontshi kwaye sikhuphe kakuhle. Emva koko, siya kudlula ngelitye elimhlophe kwaye emva koko phezu komhlaba ukuba siphathwe. Njengomgaqo oqhelekileyo akuyi kuba yimfuneko ukuba ukhuhle kakhulu. Xa ukhulelwe ngokucokisekileyo umphezulu, susa ngelaphu elimanzi de kungabikho ukuphumla kwemveliso. Ukufumana ukukhanya okufunekayo, thatha isambatho esicocekileyo nesomileyo, ukuze ubuyele kwindawo esicocileyo. Uya kubona indlela ecwebezelayo kwaye ngaphandle kokwenza umzamo omkhulu njengoko besitshilo. Kwakhona, khumbula ukuba awudingi imveliso eninzi kakhulu ukuze ubone iziphumo ezilungileyo. Uya kuyifumana kuphela ngexabiso elincinci. Oku kwenza ukuba ihlale ixesha elide kunokuba ucinga.
Yenziwa ngantoni le mveliso yokucoca?
Sithetha ngelitye phantse njengento engummangaliso. Ngoko ke, sinokuhlala sicinga ukuba phakathi kwezithako zayo kukho uhlobo oluthile lwesithako, masithi sikhethekileyo, kwaye akukho nto isuka kwinyani. Kuba ukuba ufuna ukwazi ukuba yenziwe ngantoni, siya kukuxelela loo nto kuyo uya kufumana udongwe olumhlophe kunye nesepha kunye namanzi, ngemifuno ye-glycerin kunye ne-sodium carbonate. Awudingi nantoni na ukuze usishiye indlu ngaphezu kokucoceka. Ikwayi-antibacterial, ngoko ke ukucoca kucokiseke ngakumbi kunokuba sinokucinga. Ayinalo naluphi na uhlobo lwesithako esinobuthi, ngoko ke aluyi kucaphukisa ulusu.
Iinzuzo ezinkulu zamatye
Ngendlela engenakuphepheka siye sazikhankanya kancinci kancinci. Enye yeenzuzo ezibalulekileyo kukuba sinokucoca yonke imiphezulu yendlu yethu ngayo. Ayikrwempa okanye ishiye amabala ukuba sihlanjululwa kakuhle kwaye kwakhona ukuba ukukhanya kuya kubonakala phantse ngomlingo. Ihlala ixesha elide kwaye ixabiso layo lisezantsi kakhulu kuzo zonke izibonelelo esisilungiselele zona. Isebenza kakuhle kakhulu kunye nawona mabala anzima, ishiya indlu yakho icocekile ixesha elide. Ukongeza, ezinye zazo zinevumba lelamuni eliza kugcwalisa ikhaya lakho ngaloo mvakalelo icocekileyo. Ukhe wazama?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ikhaya » Ilitye elimhlophe: Imveliso yenkwenkwezi yekhaya lakho